कुलमान घिसिङको समर्थनमा पहिलोपटक बोले डा. महावीर पुन ( भिडियो हेर्नुहोस् ) – Sidha Onlinepatra
मकै बेच्दै हिँडेकी महिलाको ठेला नगर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि बालेन्द्रको विरोध
महंगी बढेपछि श्रीमान भाडामा !
बालेनको निर्णयले मारमा गरिखाने वर्ग, सडकबाट लखेट्नु नै विकल्प हो?
नेपालमा फेरी प्रवेश भयो यस्तो रोग।सबैलाई सतर्क रहन आग्रह
केसीलाई बोर्ड अध्यक्ष बन्न उमेर र शैक्षिक योग्यता पुगेन
६ महिना पछि काठमाडौंमा रहेका विद्युतको पोल हटाउँछौं, अब इन्टरनेट सेवा दिनेले विकल्प सोच्नुपर्छ : कुलमान
बाढीले प्रभावित बारा निजगढको जनजीवन सामान्य बन्दै
बुवा बन्न लागेको खबर सुनाउँदै प्रशान्त तामाङले भने- नयाँ सुरुवात गर्न जाँदैछु !
धादिङको गल्छीमा नसोचेको भयो, कस्तो छ ४१ जनाको अवस्था ?
रामकुमारी झाँक्रीपनि भन्न थालिन् ट्याप, ट्याप.. थ्याङ्कयु सो मच.. रोज रोज प्लिज [भिडियोसहित]
मुख्य पृष्ठ /Video/कुलमान घिसिङको समर्थनमा पहिलोपटक बोले डा. महावीर पुन ( भिडियो हेर्नुहोस् )
कुलमान घिसिङको समर्थनमा पहिलोपटक बोले डा. महावीर पुन ( भिडियो हेर्नुहोस् )
210 1 minute read
काठमाडौं ११ भदौ / पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल उज्यालोमय बनेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको चार बर्षे कार्यकाल सकिन केही दपन बाकि भएकाले फेरि पनि विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी प्रमुखमा घिसिङलाई नियुक्ति गर्नु पर्ने माग बढेको छ ।
तर, यस बिषयमा सरकारले भने अहिलेसम्म कुनै किसिमको जवाफ दिएको छैन । २०७३ साल भदौ २९ गतेदेखि कार्यभार सम्हालेका घिसिङले २ महिनामै लोडसेडिङ कम गराएका थिए ।
घिसिङ नियुक्त हुनेबेला बेला घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउने संस्था समेत बनेको । घिसिङले २०७५ साल बैशाखबाट नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गरेका थिए, यसकारण पनि उनी जनताको ढुकढुकी बनेको छ अहिले ।
घिसिङ आउनु अघि दैनिक १८ घन्टा सम्म लोडसेडिङ झेलिरहेका नेपालीले लोडसेडिङ मुक्त भएपछि घिसिङमा मनमनमा सजाएका छन् । नेपालका केही जिल्लाहरुमा चोकको नामनै ‘कुलमान घिसिङ चोक’ भनेर पनि राखेका छन् । कुलमान घिसिङ कार्यकाल सकिनै लाग्दा उनको विकल्पमा को आउने हो भन्ने जिज्ञासा धेरैमा छ ।
कुलमान नै दोहोरिने पनि धेरैले अनुमान गरेका छन् । घिसिङ आफैले फेरि चारबर्ष काम गर्नपाए अधुरा कामहरु पूरा गर्ने मनसाय व्यक्त गर्दै आएका छन् । जेहोस यसको परिणाम चाडै आउनेवाला छ ।
सामाजिक सञ्जाल मार्फत कलाकारहरुले कुलमान घिसिङलाई पुन: नियुक्ति गर्नु पर्ने माग गरेका छन् । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष डा. महावीर पुनले पनि घिसिङलाई अर्को चारबर्ष काम गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपालको माया कती छ मनिषा कोइरालालाई सोध भन्दै स’लाम ठो’किन टिका सानु ले (मार्मिक भिडियो)
कल्पना मुडभरी पौडेल द्वारा अभिनित Short Movie बाहिरियो , यस्तो रहेछ भिडियो ( हेर्नुहोस भिडियो )
पुण्यले किताब पढ्न चुनौती दिए विजयले सकेनन् , झन्डै हात हालाहाल, पर्यो ठुलो लफडा (भिडियो)
भाइरल बनेका ७० बर्षका बृद्धले ल्याए २० बर्षका २ जना श्रीमती, जेठी र कान्छीको पर्यो यस्तो झ गडा (भिडियो सहित)
बेहुला लाई साइड लगाएर यता बुहारि र सासूको एस्तो डान्स भाईरल
5 hours अघि
6 hours अघि
7 hours अघि